LEGO ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံများကိုကြည့်ပါ Marvel သေးသေးလေး
01 / 09 / 2021 01 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 340 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
၏ဒီနေ့ရဲ့ပစ်လွှတ်ဆင်နွှဲရန် Lego 71031 Marvel စတူဒီယိုနောက်ဆုံးပေါ်အသုတ်၏ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်အင်္ဂါရပ်ပုံရိပ်များအားလုံးကိုစုစည်းပြီးပြီ စုဆောင်းထားသောအသေးစား.
ပိုပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာအတွက်အက္ခရာ ၁၂ လုံးကိုကြည့်ပါ Disney+ MCU က WandaVision, Loki, Falcon နှင့် Winter Soldier တို့ကိုပြသည်ဆိုလျှင်မည်သို့ဖြစ်မလဲ ... ? - ထွက်ခွာသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်သုံးသပ်မှုအသေးစိတ် minifigures တစ်ခုစီနှင့်၎င်းတို့၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်ဤစီးရီးတစ်လျှောက်ပျံ့နှံ့သွားသည်။
မင်းက Captain America၊ Zombie Hunter Spidey နဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့လှပတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ကပြခန်းကိုကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီပုံတွေအားလုံးကိုရိုက်ထားတာပါ Brick Fanatics'Dimitri Nicomanis၊ မင်းငါတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်စရိုက်အချက်တွေ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာနဲ့အင်စတာဂရမ်ပရိုဖိုင်းကိုလိုက်ကြည့်ရင်သူတို့အများကြီးတွေ့ဖူးတယ်။
ဤ minifigures အားလုံးသည် for အတွက်အမှတ်တံဆိပ်ပစ္စည်းအသစ်ကိုအခြေခံသည် Marvel Cinematic Universe၊ မင်းမှာဘယ်သူတွေရှိတယ်ဆိုတာသဲလွန်စမရှိရင်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ငါတို့မင်းကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးပြီ။ Sylvie နှင့် Captain C တို့မှအက္ခရာ ၁၂ လုံးစီတွင်နက်ရှိုင်းသောမီးမောင်းထိုးမှုများအတွက်အောက်ပါ link များကိုနှိပ်ပါartThe Scarlet Witch နှင့် Zombie Captain America သို့ er:
71031 Marvel စတူဒီယို ကနေမှာယူရန်ရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com အခုပဲ။ ထိုအလုပ်ကိုထောက်ခံရန်စဉ်းစားပါ Brick Fanatics ကျွန်ုပ်တို့၏ minifigures များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← လူကြီးများအတွက် LEGO 40485 FC Barcelona Celebration gift-with-purchase review ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Lego Batman Tumblers စျေးနှုန်းများနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည် →